အောင်မြေ: October 2008
Posted by အောင်မြေ at 10:21 PM3comments
Posted by အောင်မြေ at 1:23 AM2comments
ဗောဓိပက္ခိယတရား (၃၇)ပါးတွင် အပါအ၀င်ဖြစ်သော သမ္မပ္ပဓာန်တရား (၄)ပါးဟူသည်မှာ-
ဥပ္ပန္နာနံ ပါပကာနံ ပဟာနာယ၀ါယာမော
ဖြစ်ပြီးသော အကုသိုလ်တရားများကို ပယ်နိုင်အောင် အားထုတ်ခြင်း။
အနုပ္ပန္နာနံ ပါပကာနံ အနုပ္ပါဒါယ ၀ါယာမော
မဖြစ်သေးသော အကုသိုလ် တရားဆိုးများကို မဖြစ်ပေါ်အော် အားထုတ်ခြင်း။
အနုပ္ပန္နာနံ ကုသလာနံ ဥပ္ပါဒါယ ၀ါယာမော
မဖြစ်သေးသော ကုသိုလ်တရားများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အားထုတ်ခြင်း။
ဥပ္ပန္နာနံ ကုသလာနံ ဘိယျောဘာဝါယ ၀ါယာမော
ဖြစ်ပြီးသော ကုသိုလ်တရားများကို ဆထက်တိုးပွား များပြားလာစေရန် အားထုတ်ခြင်း။
ဗောဓိဆုတွေ ပန်ပြီး နိဗ္ဗာန်ကို မရည်ရွယ်သည့်တိုင် လူသားတိုင်း ကြိုးစားအားထုတ်သင့်သော တရားမှာ သမ္မပ္ပဓာန်တရား (၄) ပါး ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့သည် ဖြစ်ပြီးသော (ပြုလုပ်ခဲ့မိသော) အကုသိုလ် မကောင်းမှု ဒုစရိုက်တရားများကို ဆင်ခြင်နိုင်အောင် မကြာခဏ သတိရနေတတ်ပါသည်။
မိမိတို့သည် မဖြစ်သေးသော အကုသိုလ် ဒုစရိုက်မကောင်းမှု မှန်သမျှကို မပြုမိအောင် သတိထားကြရပါမည်။
မဖြစ်သေးသော၊ မလုပ်ရသေးသော ကုသိုလ် တရားများကိုမူ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရပါမည်။ ပြုလုပ်ဖြစ်အောင် အားထုတ်ရမည်။
ဖြစ်ပြီးသော ပြုလုပ်ဆည်းပူးထားပြီးသော ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ်တရားများကိုမူ ပွားများအောင် လုပ်ရသည်။ မကြာခဏ အောက်မေ့ ဆင်ခြင်ရမည်။ သီလာနုဿတိ = မိမိစောင့်ထိန်းထားသော သီလများကို အောက်မေ့ ဆင်ခြင်ခြင်း၊ စာဂါနုဿတိ = မိမိနှင့် စွန့်ကြဲပေးကမ်း လှူဒါန်းဖူး သည်များကို ခဏခဏ အောက်မေ့သတိရခြင်းတို့ကို အပ္ပမာဒ ဆိုတဲ့ သတိတရားဖြင့် ပြန်လည် ပွားများပေးရမည်။
Posted by အောင်မြေ at 8:37 PM0comments
Labels: သမ္မပ္ပဓာန်တရား (၄) ပါး
စေ့ဆော်တတ်၊ လှုံ့ဆော်တတ်၊ အောင်သွယ်ပေးတတ်လို့ စေတီလို့ ခေါ်ရပါသည်။ စေတီကနေပြီး သက်တော်ထင်ရှား ဘုရားအထိ စိတ်ရောက်သွားဖို့ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီစေတီ များမှာ (၁) ဓာတုစေတီ၊ (၂) ဓမ္မစေတီ၊ (၃) ပရိဘောဂစေတီနဲ့ (၄) ဥဒ္ဒိဿစေတီ ရယ်လို့ (၄)မျိုးရှိပါသည်
ဘုရားရှင်နဲ့ ရဟန္တာများရဲ့ ဓာတ်တော်တို့ကို ဌာပနာတည်ထားသော စေတီကို ခေါ်ဆိုပါသည်။
၀ိနည်း၊ သုတ္တန်၊ အဘိဓမ္မာ ဆိုတဲ့ ပိဋကတ်တော်များကို ဓမ္မစေတီလို့ခေါ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဓမ္မစကြာ၊ အနတ္တလက္ခဏသုတ်၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ်၊ ပဋ္ဌာန်း၊ သတိပဋ္ဌာန်၊ ဗောဓိပက္ခိယတရားတို့ကို ရွှေပြား၊ ငွေပြား၊ ကြေးပြားပေါ်တွင် ရေးသားပြီး စေတီတွင်း ထည့်သွင်းဌာပနာထားခြင်းကို ဓမ္မစေတီဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။
ဘုရားရှင်ရဲ့ အသုံးအဆောင်များဖြစ်တဲ့ သပိတ်၊ သင်္ကန်း၊ ဖိနပ်၊ ရေစစ်၊ ဗောဓိပင်များကိုဖြင့် ပရိဘောဂစေတီဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။
အုတ်၊ ကျောက်၊ ကြေး၊ သစ်သား၊ အင်္ဂတေ စသည်တို့ကို ဘုရားရှင်ပုံတော်သွန်းလုပ် ထားသည်တို့ကို ဥဒ္ဒိဿစေတီဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။
ဆိုခဲ့သည့် စေတီ(၄)မျိုးတို့ကို ကြည်ညိုခြင်း၊ ရှိခိုးခြင်း၊ ရေ-ပန်း-အမွှေးနံ့သာ လှူဒါန်းခြင်းတို့သည် သက်တော်ထင်ရှား ဘုရားကို လှူတာပူဇော်တာနှင့် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ " သက်တော်ထင်ရှား ဘုရား၌လည်းကောင်း၊ ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုပြီးနောက် စေတီရုပ်ပွားတော်၌ လည်းကောင်း၊ စိတ်ထားတူမျှသော် တူမျှသော အကျိုးကို ပေးနိုင်ပေသည်။ စိတ်ထား စင်ကြယ် မွန်မြတ်ခြင်းကြောင့် သတ္တဝါတို့သည် နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရကုန်၏။ " မိန့်ဆိုသည်ရှိပါသည်။ စေတီရုပ်ပွားများကို ပစ်မှားမိပြန်ရင်လည်း ဗုဒ္ဓဂိုဏ်း၊ ဓမ္မဂိုဏ်း သင့်တတ်ကြောင်း ဆင်ခြင်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by အောင်မြေ at 3:26 AM0comments
ပဒုမုတ္တရ မြတ်စွာဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူစဉ်ကာလက ဖြစ်သည်။ ရှေးလွန်ခဲ့သော ကမ္ဘာတစ်သိန်း ထက်၌ ဆန္ဒ၀တီပြည်တွင် မိအို၊ ဖအိုတို့ကို ပြုစုလုပ်ကျွေးနေသော အမျိုးကောင်းသား တစ်ဦးရှိသည်။ ထိုအမျိုးကောင်းသားသည် တစ်နေ့သောအခါ ပဒုမုတ္တရ မြတ်စွာဘုရား၏ လက်ယာတော်ရံ အဂ္ဂသာဝက အရှင်နိဿာမထေရ်ထံသို့ ရိုသေစွာ သွားရောက်ကာ .. ..
" ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမံ္မသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သံဃံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ " ဟု ရွတ်ဆို၍ သရဏဂုံဆောက်တည်၏။
ထိုအမျိုးသားကောင်းသည် အနှစ်တစ်သိန်း ကာလပတ်လုံး သရဏဂုံကို ထိန်းသိမ်းဆောက်တည်ခဲ့၏။ ထိုဆောက်တည်ခဲ့သော အကျိုးကြောင့် သေလွန်သောအခါ နတ်ပြည်သို့ ရောက်၍ (၈)ပါးသော အကျိုးတို့ကို ခံစားရ၏။ ထိုအကျိုး (၈)ပါးတို့မှာ-
များစွာသော စည်းစိမ်းချမ်းသာ ရှိခြင်း။
အားလုံး၏ ကြည်ညိုချစ်ခင်မှုကို ခံရခြင်း။
အသားအရောင် ရွှေအဆင်းကဲ့သို့ တောက်ပခြင်း။
ဂုဏ်သတင်း မွှေးပျံ့ကျော်စောခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
ထိုဘဝမှ စုတေပြီးသောအခါ သိကြားမင်းအဖြစ်အကြိမ်(၈၀)၊ စကြာမင်းအဖြစ် (၇၅)ကြိမ်၊ ပဒေသရာဇ်မင်းအဖြစ် မရေမတွက်နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တွင် သာဝတ္တိပြည်၌ ချမ်းသာကြွယ်ဝသော သူဌေးအိမ်တွင် လူအဖြစ် ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် (၇)နှစ်သားအရွယ်၌ ရဟန္တာတစ်ပါးထံ သရဏဂုံ ဆောက်တည်စဉ် မိမိကမ္ဘာတစ်သိန်းက ဆောက်တည်ခဲ့သော သရဏဂုံကို သတိရပြီး ပီတိသဒ္ဓါဖြစ်ကာ ၀ိပဿနာဥာဏ်စဉ်ရ၍ ရဟန္တာအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလေသည်။
ဂေါတမမြစ်စွာဘုရားသည် ထိုသူငယ်ကို ခေါ်၍ ရဟန်းပြုပေးတော်မူသည်။ သရဏဂုံတည်ခြင်း အကျိုးကြောင့် ရဟန္တာဖြစ်ခြင်းကို အကြောင်း ပြု၍ ထိုရဟန္တာအရှင်ကို "တိသရဏဂမနိယထေရ်" ဟု ဘွဲ့မည်ပေးခဲ့သည်။
(အပဒါနပါဠိ၊ ပ-၃၊ သု ဘူတိဝဂ်။)
Posted by အောင်မြေ at 7:47 AM2comments
လောကထဲတွင် နေထိုင်ကြသော ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း လောကဓံတရားများနှင့် တွေ့ကြုံရသည်မှာ ဓမ္မတာပါ။ တစ်ခါတလေ ကောင်းသော လောကဓံတရားများနှင့် တွေ့ကြုံကြရသကဲ့သို့ တစ်ခါတလေလည်း ဆိုးရွားသော လောကဓံတရားများနှင့် တွေ့ကြုံကြရ လေသည်။ ဤကဲ့သို့သော လောကဓံတရားများနှင့် တွေ့ကြုံရသောအခါ အကြင်မိတ်ဆွေတို့သည် အရာရာတွင် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကူညီအားပေး ကြသည်။ ထိုမိတ်ဆွေတို့သည် အမြဲတမ်း ပေါင်းသင်းထိုက်၊ မှီဝဲအပ်သော မိတ်ဆွေကောင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ သတိပြုနိုင်ကြပါစေ...
(၁) ဒုဒ္ဒဒံ ဒဒါတိ -
(၂) ဒုက္ကရံ ကရောတိ -
ပြုနိုင်ခဲ့သော အမှုကို ပြုပေးတတ်၏။
(၃) ဒုက္ခမံ ခမတိ -
သည်းခံနိုင်ခဲသော အရာကို သည်းခံ၏။
(၄) ဂုယှမဿ အာဝိကရောတိ -
(၅) ဂုယှမဿ ပရိဂုဟတိ -
အဆွေခင်ပွန်း၏ လျှို့ဝှက်အပ်သောအရာကို လျှို့ဝှက်၏။
(၆) အာပဒါသု နဇဟတိ -
(၇) ခီဏေန နာတိမညာတိ -
ပစ္စည်းဥစ္စာ ကုန်ခြင်းကြောင့် မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း။
Posted by အောင်မြေ at 12:28 AM 1 comments
မြင်းမိုရ်တောင်ဦး မကကျူးသည့် ကျေးဇူးအရှင် မွေးမိခင်နှင့် ဖခင်တို့သည် အနန္တဂိုဏ်းဝင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ မိဘများသည် သားသမီးတို့အပေါ် ဖ၀ါးလက်နှစ်လုံး ပခုံးလက်နှစ်သစ်၊ ၀ါးဖက်တော် ကဆီနှစ်နှင့် လူဖြစ်အောင် ကျွေးမွေး ပြုစုစောင့်ရှောက်လျက် ကျေးဇူးကြီးမားသူများ ဖြစ်ကြပါသော်လည်း သားသမီးများ ကြီးပြင်းလာကြသော် မိအိုဖအိုများ အပေါ် ရိုရိုသေသေ လေးလေးစားစား နှင့် လုပ်ကိုင်ကျွေးမွေးလျက်ရှိသည့် သားသမီးများ ရှိကြသလို ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်ခြင်း ကင်းမဲ့ကြသည့် သားသမီးများလည်း ရှိပါသည်။
သားဆိုး သမီးဆိုးတို့က မိအိုဖအိုတို့ကို ကျန်းမာရေး မကောင်းသည့်အခါ ဖုတ်ဝင်သည်ဟု ဆိုပြီး အစားအစာ မကျွေးကြဘဲ အသေသတ်သည့် သားသမီးများ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤသို့ မိခင်ဖခင် တို့အပေါ် ပြစ်မှား ကျူးလွန်ကြခြင်း ကြောင့် ပဉ္စာနန္တရိယ ကံကြီးထိုက်ကာ လပိုင်း နှစ်ပိုင်းအတွင်း အစားဆင်းရဲခြင်း၊ အ၀တ်ဆင်းရဲခြင်း၊ အနေဆင်းရဲခြင်း စသည့် ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမျိုးစုံတို့ကို ခံစားနေကြရသည့်အပြင် သက်တမ်းစေ့ မနေကြရဘဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်ပင် ဘ၀နိဂုံး ချုပ်ကြရသည်။
မိအိုဖအိုတို့ကို ရိုရိုသေသေ လေးလေးစားစား မြတ်မြတ်နိုးနိုးနှင့် ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက် လျက်ရှိသည့် လိမ္မာ ယဉ်ကျေးသော သားသမီးတို့သည် ယခု မျက်မှောက်ကာလတွင် ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာ ရှိကြပါကြောင်း၊ အနန္တ ဂိုဏ်းဝင် ကျေးဇူးရှင် အပေါင်းတို့ကို ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံတို့ဖြင့် မသိမလိမ္မာ၍ ပြစ်မှား ကျူးလွန်ခဲ့သည် ရှိကြပါသော် လက်အုပ်ချီမိုး၊ ရှိခိုးကန်တော့ တောင်းပန်ပါက မိမိတို့ ကျူးလွန်မိသည့် အပြစ်များ ကင်းလွတ်လျက် သုခချမ်းသာ ရရှိကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်အပေါင်းတို့က ၀ါဝင်၊ ၀ါထွက်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်တိုင် အခါကြီး ရက်ကြီး နေ့ထူး နေ့မြတ်များတွင် ဘုရားအစရှိသော တရား သံဃာ မိဘ ဘိုးဘွားသက်ကြီး ရွယ်အို ဆရာသမား များကို ရိုသေဂါရ၀ဖြင့် ပူဇော် ကန်တော့ ကြသည်က အပါယ်ဆင်းရဲ၊ ၀ဋ်ဆင်းရဲ အပေါင်းတို့မှ ကင်းဝေးခြင်း၊ မျက်မှောက်ကာလ များတွင် ဘေးအပေါင်း၊ ရန်အပေါင်း၊ အန္တရာယ်အပေါင်းတို့မှ ကင်းဝေးလျက် ကျန်းမာ ချမ်းသာခြင်း အပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံ ကြမှာ ဖြစ်ပါသည်။
လိမ္မာယဉ်ကျေးသော အမျိုးကောင်း သားသမီး ရတနာများ ဖြစ်ကြပါစေ…
အလိမ္မာစာမှာရှိ ဗုဒ္ဓစာပေကြည့် ….
စိတ်ကောင်းရှိ သီလမြဲ ချမ်းသာကြမည် မလွဲ …. ။
Posted by အောင်မြေ at 7:32 AM0comments
ဓမ္မရာဇိကစေတီကို ၁၈-၁၀-၁၁၉၈ ခုနှစ်တွင် နရပတိစည်သူမင်း တည်ခဲ့သည်။ ဘုရားရှိ ကျောက်စာတွင် ဓမ္မရာဇိက ဟုဖော်ပြထားသည်။
ဓမ္မရာဇိကဘုရား အရှေ့မျက်နှာ တ၀ဂူအတွင်းရှိ ဓမ္မရာဇက ကျောက်စာအရ နရပတိစည်သူမင်းသည် ၆-၁၀-၁၁၉၆ တွင် သစ်မထီး အရပ်၌ ပုထိုးတည်ရန် မြေနေရာတွေ့ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုမြေနေရာအတွက် သစ်မထီးအရပ်ရှိ မထေရ်တို့ထဲ တောင်းပန်ရာ ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ၁-၉-၁၁၉၇ တွင် ကျောက်ဖျာထက်၌ အုတ်မြစ်ချ ခဲ့ကြောင်း၊ ဘုရားတွင် ဌာပနာရန် သီဟိုဠ်သို့ ဓာတ်တော်တောင်း စေလွှတ်ပြီး ဓာတ်တော်လေးဆူကို ဌာပနာခဲ့ကြောင်း၊ ဘုရားတည်ဆောက်ရာ လက်ခငွေ (၄၄၀၂၇)ကျပ်၊ (၁၈)ပဲ လုံး ကုန်ကျခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထို့ပြင် ထိုကျောက်စာတွင် ပုဂံခေတ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လေးမျက်နှာ နယ်နိမိတ်၊ ခရိုင်အမည်၊ တိုက်အမည်နှင့် ပုဂံခေတ်စစ်အင်အား တို့ကို ဖော်ပြထားသည်။
ဓမ္မရာဇိကစေတီတွင် ပထမပစ္စယာကစ၍ လက်ယာရစ်လှည့်ပြီး ပစ္စယာအဆင့်ဆင့် ဘေးဘက်တွင် (၅၅၀)ဇာတ်များနှင့် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည့် ဗုဒ္ဓ၀င်ခန်းစဉ် စိမ်းသုတ်အုတ်ချပ်(စဉ့်ကွင်း)များကို ကမ္ပည်းစာ များနှင့်တကွ တွေ့နိုင်သည်။
(ဓမ္မရာဇိက စေတီရှိ စဉ့်ကွင်းများကို အေဒီ ၁၈၉၀ မှ ၁၉၀၀ အတွင်း ဂျာမန်လူမျိုး ဘူမိဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာ ဖရစ်ဗွန်နွတ်တလင် ကလည်းကောင်း၊ ခရစ် ၁၈၉၉ တွင် ဂျာမန်လူမျိုး ထောမန်ခေါင်းဆောင်သော အဖွဲ့ လည်းကောင်း ခိုးယူသွားခဲ့ဖူးသည်။)
Posted by အောင်မြေ at 8:20 PM0comments
မနုဟာဘုရားကို အေဒီ (၁၀၆၈)တွင် မနုဟာမင်း တည်ခဲ့သည်။ မနုဟာမင်းသည် မြင်းကပါအရပ်တွင် အကျယ်ချုပ်ဘဝဖြင့် နေရစဉ် မြင်းကပါ သူဌေးထံ မနောမယ ကြောင်မျက်ရွဲလက်စွပ်ကို ရောင်းချခဲ့ရာ ငွေလှည်း ၆ စီးတိုက် ရရှိခဲ့သည်။ မနုဟာမင်းသည် ထိုငွေဖြင့် လောကနန္ဒာသင်္ဘောဆိပ် အရှေ့မြောက် စောင်းအရပ်ရှိ သီရိဇေယျဘုံမိ ကုန်းတွင် ၁၅-၈-၁၀၆၇ တွင် ဘုရားစတင်တည်ရာ ၁၂-၃-၁၀၆၈ တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။ မနုဟာဂူ ဘုရားသည် စတုရန်းပုံ နှစ်ထပ် အဆောက်အဦးဖြစ်ပြီး ပစ္စယာများ အထက်၌ စေတီရံများ ရှိသည်။
မနုဟာဂူဘုရားအတွင်း ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားဆင်းတု (ဘူမိဖဿမုဒြာ)သုံးဆူ ရှိပြီး အလယ်မှ ပဓာနဗုဒ္ဓရုပ်ပွား ဆင်းတုတော်ကြီးသည် (၁၀.၂၄)မီတာ၊ (၃၃.၅)ပေ မြင့်ပြီး ဘေး ၂ ဖက်မှ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား ဆင်းတုနှစ်ဆူသည် (၆.၂၅)မီတာ၊ (၂၀.၅)ပေ မြင့်သည်။ ဂူဘုရား၏ အနောက်ဘက် အခန်းတွင် အလျား (၂၈.၈၀)မီတာ၊ ၉၄.၅)ပေ ရှိသည့် လျောင်းတော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ရှိသည်။
မနုဟာဂူဘုရား အပြင်ပတ်လည်တွင် အင်္ဂတေပန်းတော့ လက်ရာ၊ ဘီလူး ပန်းဆွဲများဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားသည်။ မနုဟာဘုရား ရှေ့မျက်နှာစာတွင် ကြီးလားလှသည့် သပိတ်ကြီးရှိသည်။
Posted by အောင်မြေ at 7:11 PM0comments
Labels: ပုဂံဘုရားများ, မြင်းကပါတ၀ိုက်ရှိ ထင်ရှားသော စေတီပုထိုးများ